Ungayinyanga njani i-perioral dermatitis ngokukhawuleza ngamayeza okubulala iintsholongwane - Imfundo Yezempilo | Eyenkanga 2021
Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Impilo-Ntle Iziyobisi Vs. Umhlobo Imfundo Yezempilo Cinezela Imfundo Yezempilo, Impilo Izilwanyana Zasekhaya Uluntu, Inkampani Ukuphuma Iindaba Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Inkampani Impilo Ulwazi Lweziyobisi Ekuhlaleni
Eyona >> Imfundo Yezempilo >> Ungayinyanga njani i-perioral dermatitis ngokukhawuleza ngamayeza okubulala iintsholongwane
Ungayinyanga njani i-perioral dermatitis ngokukhawuleza ngamayeza okubulala iintsholongwane
Ndandineminyaka engama-35 ubudala xa ndabona iqela lamaqhakuva amancinane abumbeneyo empumlweni yam. Ndiziphathe ezi zits zincinci njengoko bendinokwenza nakuphi na ukuphuma-ngokukhupha kunye nokuthambisa ubuso bam kwizithambiso.
Ngosuku olulandelayo, yonke loo ndawo ibomvu kwaye iluhlaza. Kwiiveki ezalandelayo, yonke into endizama ukuyicoca ulusu-ukusuka kubuso ukuya kwiikhrimu ze-steroid-yayenza mandundu imeko.
Ngoncedo lukaGoogle, ndaye ekugqibeleni ndazifumanisa ndinayo Perioral dermatitis (ekwabizwa ngokuba yi-periorificial dermatitis), imeko yokuqaqamba kolusu ugqirha wam wandixelela ukuba inokuba yinto eqhelekileyo kwabasetyhini beminyaka ethile. Amaqhuma amancinci endandiphosakele ngenxa yamaqhakuva kwasekuqaleni aba zii-pustules. Njengoko zaziphuma, ezi pustules zazisasaza irhashalala kwaye zishiya ulusu lwam lomile, lubomvu, kwaye lubhabha.
Kwiinyanga ezisixhenxe, ndakhangela kwi-intanethi amayeza endalo e-perioral dermatitis-iioyile eziyimfuneko, iviniga yeapile cider, ukutya okuchasayo, ukutshintshela kwi-non-fluoride intlama yamazinyo, ukulahla imveliso yam yolusu endiyithandayo, ukuphelisa ukuzithambisa ngokupheleleyo usebenzile. Ngapha koko, irhashalala liye landa kakhulu, lisasazeka empumlweni nasemlonyeni nasemanzini.
Ngelo xesha ke bendisazi ukuba ukukhupha ubuso bam kolu rhwaphilizo kuya kufuna amanyathelo angaphaya. Ndifunde indlela yokunyanga i-perioral dermatitis ngokukhawuleza ngokutshintsha i-steroids kunye nokunyanga okunamandla kwamayeza ngamayeza okubulala iintsholongwane kunye nokutya okuchasayo.
Yintoni ebangela perioral dermatitis?
I-Perioral dermatitis yimeko yokuphinda ibuye ekhukhumeleyo ehlala ichaphazela indawo ejikeleze umlomo, kodwa inokuchaphazela namanye amalungu obuso kunye nentamo nesifuba kwiimeko ezinqabileyo, utsho UTodd Schlesinger , MD, i-dermatologist eqinisekisiweyo yebhodi kunye nentloko yoMbutho Wezonyango wase-South Carolina. Ifana nerosacea, kodwa inembonakalo eyahlukileyo kunye nendawo eluswini.
I-Perioral dermatitis inokubonakala ifana neemeko zolusu ezininzi kubandakanya i-seborrheic dermatitis, i-atopic dermatitis, kunye ne-acne, oko kuthetha ukuba ukuqeshwa kunye nedermatologist kuhlala kufanelekile.
Akukho sizathu saziwayo se-perioral dermatitis, kodwa Oogqirha besikhumba bayavuma ichaphazela kakhulu abasetyhini abaphakathi kweminyaka engama-20 nengama-45 ubudala 90% kuwo onke amatyala e-perioral dermatitis kwenzeka kubafazi abaphakathi kweminyaka eli-18 nengama-50 ubudala.
Ngelixa kungekho sizathu saziwayo semeko, izinto zehomoni zinokudlala indima kwaye uxinzelelo luye lwanxulunyaniswa nokubuyela umva komva ngaphakathi useto lophandos . Kukho izinto ezininzi ezinokubangela ukuba i-perioral dermatitis ibe mandundu, kubandakanya:
Intlama yamazinyo ecociweyo
Iikhrimu zeSteroid, kubandakanya i-hydrocortisone engaphezulu kwe-counter
Usulelo lweBacteria okanye lomngundo
Ichongwa njani i-perioral dermatitis?
I-Perioral dermatitis ihlala ifunyanwa ngugqirha wesikhumba ejonga inkangeleko yayo, indawo ekuyo kunye nokusasazwa kwayo kulusu kunye nokubuza imibuzo engembali efanelekileyo, utshilo uGqirha Schlesinger.
Uthi ekuthatheni imbali, iidermatologists ngamanye amaxesha zinokunceda izigulana zichonge izinto ezizibangela, nokuba kukutya okuthile (kubandakanya iziqholo ezithile ezinje ngesinamoni), amayeza ( ibuprofen okanye ezinye iziyobisi ezichasayo ), ukwenziwa, kunye / okanye intlama yamazinyo e fluoridated.
Omnye umbutho oqhelekileyo unokusetyenziswa kwe-steroid engapheliyo kwaye kuye kwaxelwa emva kokusetyenziswa kwe-nasal steroids okanye i-inhalers, utshilo uGqirha Schlesinger.
Ukutya kunye nonyango lwendlela yokuphila kwi-perioral dermatitis
Kwiimeko ezinobuzaza be-perioral dermatitis, ugqirha wakho okanye ugqirha wesikhumba unokucebisa ukuba wenze utshintsho oluthile ekhaya ukuze ubone ukuba ungawuphelisa na umgqumo wedwa. Ukuba unokuchonga ukucaphukisa okubangela ukuba irash yakho ivele (njenge-topical steroids) kunye nokususa oko kuyacaphukisa kwindlela yakho yemihla ngemihla, kunokwenzeka ukuba ususe i-perioral dermatitis ngaphandle kokungenelela kwezonyango.
Unyango lwendalo lwe-perioral dermatitis lubandakanya:
Ukuyeka ukusebenzisa ii-steroids
Ukwamkela ukutya okuchasayo okuchasayo ukuphucula impilo yamathumbu
Ukuphelisa unyango lwamabala kunye neemveliso ezichasene nokwaluphala kwinkqubo yakho yolusu
Sebenzisa isicoci esicocekileyo kunye nesithambisi esenzelwe ulusu olubuthathaka
Ukugcina ulusu lwakho lukhululekile kude kube yinto enqabileyo
Ukutshintshela kwi-toothpaste ngaphandle kwe-fluoride
Ukukhetha i-sunscreen yendalo
Ukuphepha ukubekwa elangeni ixesha elide, amaqondo obushushu aphezulu kunye nomoya
Nxibelelana nogqirha wakho ngaphambi kokuzama naluphi na unyango lwasekhaya, njengoko abanye benokuthi bayenze mandundu imeko. Kodwa ukuba unesifo se-perioral dermatitis, kwaye ngakumbi ukuba uyakwazi ukubona izinto zakho ezibangela ukuba kwenzeke, kunokwenzeka ukuba ususe i-perioral dermatitis ngaphandle kwamayeza.
Iintsholongwane ze-perioral dermatitis
Inkqubo ye- Ikholeji yaseMelika yeOsteopathic yeDermatology (AOCD) ibiza amayeza okubulala iintsholongwane ngomlomo olona nyango luthembekileyo lwe-perioral dermatitis. Ezi zintathu zonyango zichazwe ngokufuthi zibandakanya:
I-Tetracycline (iTetracycline coupons | Iinkcukacha zeTetracycline)
I-Doxycycline (Doxycycline coupons | Iinkcukacha zeDoxycycline)
IMinocycline (iMinocycline coupons | iinkcukacha zeMinocycline)
Isizathu sokuba abanye oogqirha babakhuthaze abaguli ukuba bazame unyango lwendalo kunye neendlela zokuphelisa kuqala kukuba ukunyanga i-perioral dermatitis kunye ne-antibiotics yomlomo kufuna ikhosi ende yonyango. Kuqhelekile ukumiselwa naphi na ukusuka kwiiveki ezisibhozo ukuya kwezili-12 zemithi yonyango, kwaye ngamanye amaxesha ezo zintsholongwane ziza neziphumo zazo, kubandakanya ukucaphuka kwesisu kunye usulelo lwegwele . Kodwa ngenxa yamatyala amandundu, iyeza lokubulala iintsholongwane ngomlomo lelona lilo liqinisekileyo lokunyanga i-perioral dermatitis ngokukhawuleza. Injongo yonyango lwe-antibiotic yonyango kukubonelela ngokukhawuleza, Ngokutsho kwabaphandi .
I-Perioral dermatitis cream
Nangona i-AOCD icebisa ii-cream ze-steroid ukuba ziyekwe kwangoko, njengoko iikhrimu ze-steroid zinokuyenza mandundu imeko, hayi i-steroidal Unyango olunokusetyenziswa ngaxeshanye.
Unyango lwe-non-steroidal topical olunokuthi lusetyenziswe kunye ne-antibiotics lubandakanya imithombo (iyeza lokubulala iintsholongwane), UElidel (pimecrolimus), okanye ii-antibiotics, ezifana clindamycin into yokuthambisa, kunye ukhilimu erythromycin .I-pimecrolimus ye-topical, eyi-calcineurin inhibitor, ikwasetyenziselwa ukunyanga i-perioral dermatitis, nangona kunjalo, lukhetho olubizayo.Faka isicelo njengomaleko omncinci kwindawo echaphazelekayo, uhlala kabini ngemini. Unyango lwezihloko zingathabatha ukuya kwiinyanga ezintathu ukufikelela ekusebenzeni okuphezulu kodwa zisetyenziswe ecaleni komlomo ngomlomo, i-perioral dermatitis inokuthi icace kumcimbi weeveki.
ZIQHELEKILEYO: Iinkcukacha zeMetronidazole | Iinkcukacha zikaElidel | Iinkcukacha zeClindamycin | Iinkcukacha ze-Erythromycin
Zama ikhadi le-SingleCare
Kuthatha ixesha elingakanani ukucoca i-perioral dermatitis?
Ndenze konke endinako ukushenxisa izinto ezibangela ukuba ndisekhaya isiqingatha sonyaka kwaye ndisebenzise ikhemesti ye-metronidazole cream iinyanga. Akukho nto isebenzayo, kwaye irhashalala yayiqhubeke nokusasazeka. Kwabo babuzayo ukuba ungasusa njani i-perioral dermatitis ngobusuku, impendulo ithi: ngekhe.
Ugqirha wam wandinika i-doxycycline kagqirha yeenyanga ezintathu. Ugqirha wam, owayelwile eyakhe imeko ye-perioral dermatitis kwixa elidlulileyo, wachaza ukuba le meko inendlela yokubuya xa uyeka unyango phambi kokuba luphele ngokupheleleyo, ke undixelele ukuba qhubeka nokuthatha i-antibiotics ubuncinci iinyanga ezimbini, okanye kude kube kucace ukuba iirhashalala bezicacile iiveki ezimbini ezipheleleyo.
Uye wandixelela ukuba mandiqhubeke ndisebenzisa i-metronidazole cream kude kube kuphelile irhashalala.
Ndiqale ukuqaphela umohluko kwiimpawu zam malunga neeveki ezimbini kwikhosi yam yamayeza. Ukucaphuka bekuphantsi kwaye ubomvu buyehla. Ulusu lwam alusakhangeleki luhlala luvutha.
Kwakumalunga neeveki ezintlanu ngaphambi kokuba irhashalala isuswe ngokupheleleyo, ke ndiye ndaqhubeka namayeza am okubulala iintsholongwane kwikhosi yeenyanga ezimbini. Emva kokumisa unyango, irhashalala yahlala kude.
Kwiinyanga ezalandelayo, ndiye ndaqala kancinci ukongeza iimveliso endizisusileyo ndabuyela kwinkqubo yam yolusu. Ndiqale ngothambisa amehlo. Kwaye ke exfoliator yam oyithandayo. Kwaye ekugqibeleni, ndaziva ndikhululekile ukunxiba ubuso obugcweleyo kwakhona, ngaphandle koloyiko lokutsha.
Khange ndongeze kwakhona kwiikhrimu zam zokuguga, nangona kunjalo. Ndagqiba kwelokuba ndibenemibimbi kunokuba nobuso oburhabaxa.
Ungayikhusela njani i-perioral dermatitis
Ukuba bendisazi esona sizathu se-perioral dermatitis yam, bendinokwazi ukuthintela i-flare-ups ngcono. Nangona kunjalo, xa sele unayo, kunokwenzeka ukuba iya kubuya ngaxa lithile. Nkqonkqoza emthini, ndiyenze unyaka onesiqingatha ngaphandle kokuphindeka ukuza kuthi ga ngoku.
Into efanelekileyo ongayenza ukukhusela i-perioral dermatitis kukuba mnene kwesikhumba. Kwaye ukubona ugqirha kwangoko ukuba uqala ukuqaphela ukuphindaphinda. Ukuzisola okwenyani endikwenzileyo kukuthathela ingqalelo i-antibiotics ye-perioral dermatitis ukuqala. Bendingayi kubufihla ubuso bam kwiikhamera okanye ndiziva ndineentloni zokuphuma phandle kangangesiqingatha sonyaka.
Ukuba iyabuya, amayeza okubulala iintsholongwane aya kuba yeyam yokuqala unyango.
ICyclobenzaprine dosage, iifom, kunye namandla
Olona nyango luphantsi ngama-25 kwi-SingleCare
cwangcisa b inyathelo elinye ukusebenza kwiyure enye
ithatha ixesha elingakanani ibha ye xanax
Ngaba i-clonazepam yomelele njenge-xanax?
ixabisa malini ivf
indlela yokulahla umngundo omnyama wezikhonkwane
Isicwangciso esiphakamileyo sezempilo kunye neengozi